Ntụle na-abaghị uru nke Tadalafil Generic For ED | PHCOKER
Ntụle na-abaghị uru nke Tadalafil Generic For ED
1. Tadalafil– Dị ka ọgwụ na-adịghị arụ ọrụ
2. Kedu ihe bụ Tadalafil (171596-29-5)?
3. Tadalafil (171596-29-5) - Olee otu o si aru oru?
4. Tadalafil– Olee otu m g’eme mgbe m chọrọ iwere Tadalafil?
5. Tadalafil– Gịnị bụ nsogbu ya?
6. Tadalafil– Kedu ụdị nke ngwa Tadalafil?
7. Tadalafil– Gịnị banyere nyocha Tadalafil?
8. Tadalafil– Otu esi azụta Tadalafil n'ịntanetị?
9. Tadalafil (171596-29-5) –Nchịkọta
Phcoker is a professional manufacturer to produce tadalafil powder
Tadalafil– Dị ka ọgwụ na-adịghị arụ ọrụ
Erectile dysfunction (ED) abụrụla nsogbu ahụike nkịtị n'etiti ụmụ nwoke, ọkachasị ndị kụrụ 40. Nnyocha e mere na nso nso a na-egosi na 5% nke ụmụ nwoke gbara afọ 40 na-arịa ọrịa zuru oke. Onu ogugu na-abawanye ruo 15 maka umu nwoke 70. Iji dozie nsogbu a, ndị ọkà mmụta sayensị ewepụtala ọgwụ dị iche iche iji nyere ụmụ nwoke aka ịnọgide na-enwe oke ịbụ nwoke ma jiri ikike nrụpụta kwesịrị ekwesị. Tadalafil (CAS 171596-29-5) bụ otu n'ime ọgwụ ọgwụgwọ ED kachasị ama.
Kedu ihe bụ Tadalafil (171596-29-5)?
Aha aha: Cialis, Adcirca, wdg.
Structure Ọdịdị Chemical nke Tadalafil
Tadalafil bụ ọgwụ a na-anabata FIDA nke ejiri mee maka ọgwụgwọ dysfunction ma ọ bụ enweghi ike n'etiti ụmụ nwoke. Ọ na - arụ ọrụ yiri nke Viagra na Levitra site na ịba ụba ọbara nke amụ rue amụ, n'ihi nke a, ọ na - enyere mmadụ aka ibido ọgbụgba. O kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwoke toro eto, ndị nwere nsogbu nnweta ma ọ bụ jigide arụ arụ arụ.
Ada Tadalafil akụkọ ihe mere eme
Galxo Wellcome, nke ya na Lilly ICOS, ụlọ ọrụ nkà na ụzụ na-arụkọ ọrụ, bụ nke mbụ ịchọta na ịzụlite Tadalafil. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ ahụ kewara ụzọ na 1996 na afọ abụọ mgbe nke a gasịrị, ụlọ ọrụ ICOS na Eli Lilly banyere n'otu ụlọ ọrụ na-emepụta ụlọ ọrụ ọhụrụ aha ya bụ Lilly ICOS, LLC. Ulo oru ahu weputara ogwu wee malite ire ya dika Cialis.
Mgbe afọ ole na ole gasịrị, Lilly ICOS, LLC. gbara akwụkwọ ọhụrụ maka ọgwụ ahụ na Tadalafil dịka aha aha na Cialis dị ka aha njirimara. Disemba 2003 bụ oge akụkọ ihe mere eme maka Tadalafil dịka ọ bụ oge nke nri na nchịkwa nri (FDA) masịrị ya maka ire ya na United States dịka ọgwụ maka ọgwụgwọ dysfunction.
Tadalafil (171596-29-5) - Olee otu o si aru oru?
Withmụ nwoke nwere ED na-enwekarị enzyme akpọ PDE5. Enzyme a na-egbochi guanosine monophosphate cyclic (cGMP), ihe dị oke mkpa na nhazi nke nrụrụ penile dị mma. cGMP na - enyere akara akwara ozi mmadụ aka na pelvic iji kpalite ịhapụ nitric oxide. N'ihi ya, ihe ndị na-akwọ mụrụmụrụ nke akwara pelvic ya na-atụrụ ndụ na nke a na-eduga n'ọbara na-erugharị n'ime arịa ndị ahụ iji jupụta oghere ndị dị n'akụkụ akụkụ ahụ ya. Nke a na - eme ka amụ bụrụ ihe siri ike ma tinye ya.
PDE5 dị elu na ezughị ezu cGMP n'ime mmadụ na-eme ka ahụ ya ghara ịkọwapụta akara ngosipụta nke akwara ozi ya wepụtara, na-eduga na ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ zuru ezu enweghị ikike iji mebie penile. Mụ nwoke nwere nsogbu erection nwere ọbara dị ala na amụ ha. Ebe ọ bụ na amụ na-esiri ike n'ihi ọkọnọ na-abawanye, ndị dị otu a enweghị ike ịkpụpụta n'ihi ụkọ ọbara na-ezughi oke. Semaglutide mmetụta naanị dị ka Peptide? Ee, Ọtụtụ Karịa Nke Ahụ!
Mgbe nwoke nwere penile ere adịghị ike na-ewe Tadalafil (171596-29-5) dị ka edepụtara ya, ọgwụ ahụ na-ebelata mmetụta nke PDE5 na usoro ahụ ya ma nke a na-eme ka cGMP nyocha iji laghachi na ọkwa ọ bụla. Dị nnọọ ka ndị ọzọ Erectile na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe, Tadalafil na-arụ ọrụ site n'ịgbasa ọkwa ọbara nke nwoke nakwa n'ihi ya, mgbe enwere mmekọahụ, ọbara ya na-arịwanye elu, akụkụ ahụ siri ike, n'ihi ya, e wuru ya.
Ọ bụ ezie na ọgwụ ahụ na-eme dịka Viagra, Spedra na Levitra mmetụta ya dị ogologo - ruo 36 awa. Ka a sịkwa ihe mere a na-akpọ ya na ngwugwu izu ụka, nanị n'ihi na otu ọgwụ nke ọgwụ ọjọọ nwere ike ime ka nwoke nwere ED nwee ezigbo ụlọ ma soro onye ya na ya na-enwe mmekọahụ nwee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu ụka zuru oke.
Mgbe nwoke na-ewere ọgwụ 36 hour Tadalafil, ọgwụ ahụ na-ebelata PDE5 n'ogo ya ngwa ngwa (n'ihe dịka 15 ruo 45 nkeji) ma dị ka nsonaazụ ya, cGMP na-alaghachi n'ọnọdụ nkịtị. Ka o sina dị, ebe ọ bụ na ọgwụ ahụ nwere obere ndụ, mmetụta ya ga-apụ n'anya n'ime ụbọchị abụọ ma dị ka nsonaazụ ya, ọkwa nke PDE5 na-abawanye ọzọ ma nwoke ahụ efunahụ ikike ya penile ọzọ.
N'aka nke ọzọ, mgbe mmadụ na-ewere ọgwụ Tadalafil kwa ụbọchị maka ọgwụgwọ ED, ọgwụ ahụ na-enyere aka idebe cGMP n'ime ahụ ya na ọkwa ahụ ike oge nile ma ọ bụrụ na ọ na-agbaso ọgwụ ọgwụ ahụ ọgwụ. Nke a na - enyere nwoke aka inwe ụlọ nrụpụta ngwa ngwa mgbe ọ bụla ọ na - akpali agụụ mmekọahụ. Otú ọ dị, ụyọkọ kwa ụbọchị nke ike dị ala Tadalafil na-ewere 4 ruo ụbọchị 5 iji malite ịrụ ọrụ. Ya mere, echela ngwa ngwa ịghọ ụgbụ ụra mgbe ị na-ebute ihe mbụ; naanị ka oge ahụ kwụsị, ị ga-abụkwa na ọ bụrụhaala na ị na-ewere ya dị ka edepụtara ya.
Tadalafil– Kedu ka m ga - esi mee mgbe m chọrọ iwere Tadalafil?
N'ịbụ ọgwụ na-ede ọgwụ-naanị ọgwụ, nwoke kwesịrị ịkpachara anya mgbe ọ na-eme atụmatụ ime ya. Karịsịa, o kwesịrị ime ma hụ ihe dị iche iche n'ihu, mgbe na mgbe ọ nwụsịrị.
Ka anyị jiri ihe ndị mmadụ kwesịrị ime tupu anyị ewere ọgwụ ọjọọ.
Mee nke a tupu iwere Tadalafil:
Gaa leta dọkịta ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ maka ndụmọdụ na usoro ọgwụ Tadalafil ziri ezi maka gị, n'etiti ozi ọgwụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa ụfọdụ, gụnyere Tadalafil n'onwe ya ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mejupụtara ya, mee ka dọkịta ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike mara banyere ya. Nwere ike ịnweta ozi gbasara ihe ndị mejupụtara ọgwụ ahụ n'aka ọkachamara ahụike.
Mee ka dọkịta gị mara ma ọ bụrụ na ị rụọla riociguat ma ọ bụ nitrates isosorbide dinitrate na nitroglycerin na nso nso a ma ọ bụ ka na ha. Nwere ike ikwenye site na dọkịta ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụrụ na ọgwụ ndị ị na-eji (ma ọ bụrụ na ọ bụla) emewo ihe. Enwere ike ịgwa gị ka ị ghara ị takeụ Tadalafil ma ọ bụrụ na dọkịta achọpụta na ị na-ewere nitrates n'ihi na ha na Tadalafil adịghị mma.
Cheta na Tadalafil na-eji akara aha Adcirca ma ọ bụ Cialis bịa. Yabụ, ịnweghị iji otu oge ahụ, ma ọ bụghị ya, ị ga-a andụ ọgwụ ọjọọ na nsonaazụ ya nwere ike ịbụ adịghị mma. Ga-eji naanị otu onye n'ime ha gwọọ gị n'otu oge.
Taking na-a (ụ (ma ọ bụ na-ezube ị takeụ) ọgwụ ọ bụla ọzọ, ọ bụrụ ọgwụ ma ọ bụ edeghị ya, vitamin ma ọ bụ mgbakwunye nri. Ọ bụrụ ee, buru ya kọọrọ ya ọkachamara dibịa bekee. Ihe omuma a di nkpa dika o gha enyere dọkịta ma obu ndi dibia ogwu aka ka ha guzozie onodu ogugu nke kachasi nma diri gi, na echebara ogwu ndi ozo ma obu ihe ndi ozo ichoro ma obu nke ichoro iji anya. Mgbe ị nwere ihe ọmụma ahụ, ọkachamara ahụ nwere ike ịchọpụta na ọ dị mkpa iji nyochaa gị nke ọma maka mmetụta ndị nwere ike.
♦ you na-eji mkpụrụ osisi ọ bụla, ọkachasị wort St. O buru na ee, mee ka onye okachamara mara banyere ya.
♦ Ọ bụrụ na ị na-ese anwụrụ ọkụ ma n'otu oge ma ọ bụ n'ọtụtụ oge ọ bụla nwere ụlọ ere nke na-adịgide ruo ihe karịrị awa anọ, ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-enye ọgwụ.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị gbọọ agbọ, gwọọ mmiri na-adịghị mma, afọ ọsịsa, ma ọ bụ na ị naghị a waterụ mmiri zuru ezu ma yabụ na ị na-eche na ọ ga-abụ na mmiri ezughị gị.
Mee ka dọkịta gị mara ma ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị na-arịa ọrịa pulmonary veno-occlusive na ndụ gị ma ọ bụ ọnọdụ ahụike ọ bụla nke nwere ike imetụta ọdịdị nke amụ gị. Ọnọdụ ndị dị otú ahụ gụnyere ọrịa shuga, ọbara mgbali elu ma ọ bụ dị ala, nkụchi obi / ọdịda, nsogbu mgbasa ọbara, ọbara cell, nsogbu obi, oge mgbu, ọtụtụ myeloma, ọnya afọ, ọrịa ọgbụgba, ọrịa obi, ọrịa akụrụ, ọrịa imeju na ọrịa strok
♦ Ọ bụrụ na ị hụrụ mmanya na-aba n'anya n'anya, ị ga-achọ ị useụ ya mgbe ị na-a takingụ ya Tadalafil, ịkwesịrị ka gị na dọkịta gị kwurịta ya. Mgbe ị tụlere ahụike gị, dọkịta gị ga-enye gị ndụmọdụ, ma ọ bụ iji zere ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ buru ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị. N'ihe banyere mmanya ma ọ bụ ntụrụndụ, a ga-adụ gị ọdụ ka ị ghara karịa iko ise. Nke a bụ n'ihi na ịṅụ mmanya na-aba n'anya mgbe otu onye na-enwe mmetụta nke Tadalafil nwere ike ịkpata mmetụta dị ka ọbara mgbali elu, ụba ụba obi, isi ọwụwa nakwa dizziness.
♦ Ọ bụrụ na onye ọkachamara ahụike gwara gị ka ị ghara inwe mmekọahụ n'ihi ahụike, ị ga-akpọrọ ya na dọkịta gị.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị na-enwe obi mgbu mgbe ị na-enwe mmekọahụ. Obi gị nwere ike ịda mbà n'ihi nsonye gị na inwe mmekọahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa obi.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị na-akpọ isiala ma ọ bụ na ewepụwo akụkụ ya.
Ekwesighi iwere Tadalafil ma obu:
Ọ dịtụla mgbe ị hụrụ ọhụụ nke a na-akpọ Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION)
♦ ♦ na-arịa ọrịa obi
Have arịa ọrịa strok ma ọ bụ nkụchi obi, n'oge na-adịbeghị anya, ọkachasị ọnwa isii gara aga
♦ ♦ na-arịa ọbara mgbali elu
Hyper Inwe ọbara mgbali n’enweghị nchịkwa
Nwee ihe nfụkasị nke ihe ndị dị na Tadalafil
Buru n'uche na mmetụta nke ọgwụ ahụ nwere ike ọ gaghị abụ ozugbo. Ọ bụ ezie na ọgwụ 36-hour na-enye nsonaazụ Tadalafil chọrọ ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere ọgwụ kwa ụbọchị, ị nwere ike ichere ihe dịka 15 ruo 45 nkeji iji nweta mmetụta achọrọ nke ọgwụ ahụ.
Ejila nitrates ma ọ dịkarịa ala awa 48 tupu oge ị na-atụ anya iwere Tadalafil.
Nweta Tadalafil site na ebe a tụkwasịrị obi. Nwere ike ịtụkwasị obi na Phcoker.com maka ezigbo ngwaahịa Cialis, gụnyere Tadalafil.
Mgbe ị na-ewere Tadalafil
♦ Ozugbo dọkịta gị chọpụtara na ị kwesịrị iji Tadalafil wee kọwaa gị ọgwụ kwesịrị ekwesị maka ọgwụgwọ ED, enwere ọtụtụ ihe ị kwesịrị ime mgbe ị na-a theụ ọgwụ. Nke a bụ ndepụta nke usoro na ihe don'ts:
Jide n'aka na ị na-agbasochi usoro ọgwụgwọ nke dọkịta gị nyere. Theụọ ọgwụ ahụ kpọmkwem etu ọkachamara ahụ siri dụọ gị ọdụ. I kwesiri ị takeụ ọgwụ ahụ ọ dịkarịa ala ọkara elekere tupu oge ị zubere ịmalite inwe mmekọahụ.
Wal Ghaa mbadamba mbadamba mmiri na mmiri. Nwere ike were ya ma ọ bụ na-enweghị nri. A drinkụla mmanya na-aba n'anya mgbe ị na-a theụ ọgwụ ahụ, n'ihi na nke a na-eme ka ohere ị nwere na nsonaazụ dịka ịba ụba mgbe ị biliri.
Zere ị drinkingụ ihe ọ juiceụfụ mkpụrụ osisi grape, rie mkpụrụ osisi grape ma ọ bụ jiri ngwaahịa mkpụrụ osisi grape mgbe ị na-ewere Tadalafil ebe ọ bụ na mkpụrụ osisi grape nwere ike igbochi ịdị irè nke ọgwụ ahụ.
I kwesịkwara izere ị alcoholụ mmanya mgbe ị na-eji ọgwụ ED. Mmeghachi omume nke ọgwụ na mmanya na-aba n'anya nwere ike ime ka ị nweta ụfọdụ nsonaazụ.
Kwesịrị ị takeụ ọgwụ ahụ dịka ego dọkịta gwara gị; ọ bụghị karịa, ọ bụghị ihe na-erughị.
♦ A takeụla ọgwụ ahụ ogologo oge karịa ka enyere gị aka.
♦ I nwere ike iwere Tadalafil ma ọ bụ na-enweghị nri
Wal Ghaa mbadamba Tadalafil dum na mmiri mmiri; emebila ma ọ bụ kewaa mbadamba nkume ahụ.
I kwesiri ị Tụ Tadalafil tupu ị nwee mmekọahụ ma ọ bụghị karịa otu oge n'ụbọchị.
♦ necessarily ga-enwerịrị n ’usoro onunu ogwu. Yabụ, were ya dịka onye ọkachamara ahụike siri chọọ.
♦ Ọ bụrụ na ị tufue ọgwụ, egbula Tadalafil ọzọ iji mejupụta ya. Ọ bụrụ na agbaghara gị, hapụ ya ka ọ dị otu a ma gaa n'ihu na-ewere dị ka iwu.
Mgbe o nwusịrị Tadalafil
Gbaa mbọ hụ na ị na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ma nwee mmekọrịta nwoke na nwanyị n'ihi na ọgwụ ahụ ga-adị ire naanị ma ọ bụrụ na ị na-akpali mmekọahụ.
♦ Ọ bụrụ na ị ga-awa ahụ, ọbụlagodi dị njọ dị ka ịwa ahụ eze ma werela Tadalafil; gwa dọkịta gị ma ọ bụ dọkịta dọkịta na-awa gị banyere ya tupu ịwa ahụ.
Ọ bụrụ na ị werela Tadalafil n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụ ka ọ na-aga n'ihu ma ịchọrọ ọgwụgwọ ọrịa obi mberede, mee ka onye nlekọta ahụike gị mara banyere ya. Tadalafil na-emeghachi omume na ọgwụ obi ma yabụ, mgbe ị kpughere onye ọkachamara ahụike gị ozi dị otú ahụ, ha ga-enwe ike ịmebe usoro kachasị dị nchebe, na-atụle ịdị irè Tadalafil nwere ike n'ahụ gị. Yabụ, dọkịta gị ga-enwe mmasị ịmara mgbe ị tookụrụ ọgwụ ahụ ikpeazụ.
Jide n'aka na ị debere ọgwụ ahụ na ụlọ okpomọkụ, na ebe dị jụụ na nkụ; pụọ na okpomọkụ na mmiri.
Tadalafil– Gịnị bụ nsogbu ya?
Ọ bụ ezie na Tadalafil dị irè dịka ọgwụgwọ ED, ọ nwere ike ịkpata nsogbu ụfọdụ na-adịghị mma. Ọ bụ ezie na nwoke na-aṅụ ọgwụ adịghị ka ọ ga-enweta mmetụta ndị a niile, ọ ghaghị ịchọ nlekọta ahụike ma ọ bụrụ na ọ hụ ụfọdụ n'ime ha.
▲ Mmetụta ndị dị na ga chọrọ dọkịta
eze na-aṅụ ọgwụ n'ihi na ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na enweghi nsogbu na oge.
A: Mmetụta ndị na-emekarị
N'okwu a, mmetụta ndị ọzọ na-emetụta gụnyere:
Ngwurugwu imi / nchịkọta anụ
Ihe mgbochi akpụ
Ahụhụ adịghị mma
Enweghị ike ịnụrụ ntị
Ịdị ọcha ma ọ bụ isi ụcha mgbe ị na-ebili ngwa ngwa site na ọnọdụ ụgha / ịnọ ọdụ
Nsogbu siri ike ma ọ bụ adịghị ike
Ọ dị mma, na-acha uhie uhie, ma ọ bụ na-enwe obi ụtọ
Egbugbere ọnụ, ire ma ọ bụ akpịrị
Na-agbanye ntị na ntị gị
B: Obere nmetụta
(1) Na okwu siri ike
Ọ bụ ezie na nsonaazụ Tadalafil ndị na-esonụ dị obere, ọtụtụ n'ime ha nwere nkwupụta siri ike ma ọ bụrụ na ha emee.
Mgbu ma ọ bụ ogologo oge amụ erection
Nnyocha imeju na-adịghị mma
Mgbochi ma ọ bụ anya kpuchiri anya na-agbanye arịa ọbara
Ọbara mmetụ ọbara
Mbelata ọbara mgbali mgbe ị guzoro
Mmetụta ọbara dị ala
Ọrịa anya n'ihi nsogbu ọbara
Obi na-egbu egbu ma ọ bụ na-agba ụra
Akụrụ ọrịa na belata ọrụ akụrụ
Ọhụụ na mberede
Akpụkpọ anụ na mgbapụta akpụkpọ ahụ
Stevens - Johnson ọrịa
(2) Obere okwu siri ike
Ndị na-esonụ bụ mmetụta ndị ọzọ na-adịghị na ya nke Tadalafil (171596-29-5) mana ha nwere okwu dị oke njọ karịa nke e depụtara.
Mgbaju mmiri na nkuchi anya
Ọkụ ọkụ na afo
Ụra ụra oge
Enwetara anya ihe na-adịghị mma
Ụdị ọnụ ọnụ
Nchekwa oge ncheta oge dị mkpirikpi
Anya mmiri dị ukwuu
Mgbaju mmiri na ụkwụ, aka, ụkwụ ma ọ bụ ogwe aka
Nnukwu ọbara na anya lining
Ihe nkwonkwo obi
Egwu ma ọ bụ na-agba ume
Ndepụta a dị n'elu anaghị enwe mmetụta niile nke ọgwụ ọjọọ ahụ. Ya mere, a dụrụ gị ọdụ ka ị nweta ihe ọmụma zuru ezu banyere ihe niile nwere ike ime site na dọkịta gị. Ọ bụrụ na ịnweta mmetụta ọzọ n'akụkụ a na-edeghị ebe a, ị nwere ike ịkọ ya FDA na 1-800-FDA-1088.
▲ Mmetụta ndị na-anaghị achọ dọkịta
Mmetụta mmetụta Tadalafil agaghị achọ nlekọta ahụike iji pụọ. Fọdụ na-apụ naanị ha ozugbo ị bodyụ ọgwụ na ahụ gị. E wezụga nke ahụ, onye nlekọta ahụike gị nwere ike ịdụ gị ọdụ otu ị ga - esi gbochie ma ọ bụ belata mmekpa ahụ Agbanyeghị, ị ka nwere ike ịjụ ọkachamara ahụike gị ma ọ bụrụ na ha na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-enye gị nsogbu. Offọdụ n'ime mmetụta ndị a na-adịkarị karịa ndị ọzọ. Ka anyị malite na ihe ndị ọzọ:
A: Ihe ndị ọzọ na-agwọ ọrịa ahụ
Acid ma ọ bụ afo uto
B: Nsogbu ndị na-agwọ ọrịa na-adịkarịghị
Ihe mmetụta Tadalafil a na-aga na nke onwe ha n'enweghị ọgwụgwọ ọ bụla mana ha anaghị adịkarị.
Prickling, "pin na agịga", tingling, craw na ọkụ mmetụta
Mgbu, ọkụ ma ọ bụ akọrọ anya
Akọrọ ma ọ bụ akpịrị akpịrị
Ike gwụrụ n'ike
Ugwu na-egbuke egbuke
Ọkpụkpụ na-egbu egbu
Ụkwụ, ogwe aka na / ma ọ bụ ụkwụ
Mgbu ma ọ bụ na-egbu akpịrị
Na-egbu mgbu, na-aza aza ma ọ bụ na-acha ọbara ọbara, nkuchianya ma ọ bụ nkuchianya n'ime imechi
Mbelata uche iji metụ aka
Mgba aghara ma ọ bụ oké ụra
Ewu ere nke penis
Igwe ihu igwe ma ọ bụ fụrụ akpụ
Ọkụ nke nkwonkwo
Nnukwu abdominal ma ọ bụ afo mgbu
Tadalafil– Kedu ụdị nke ngwa Tadalafil?
Tadalafil na-abịa n'ụdị mbadamba, mmiri mmiri ma ọ bụ. Kedu ụdị nke ị na - eji ọgwụ ahụ, jide n'aka na ọ dị irè dị ka ọgwụ na ụdị ọ bụla ọzọ. Liquid Tadalafil dị ka Tadalafil ma ọ bụ Tbadalafil ma ọ bụrụhaala na ị zụtara ọgwụ sitere na isi iyi egwu. Ọ bụ ezie na enwere ike inwe ihe dị iche, ọ ga-abụ ihe na-enweghị isi.
♦ Tadalafil mkpụrụ ọgwụ ma ọ bụ mbadamba
Dịka e kwuru na mbụ Tadalafil na-abịa dị ka mbadamba, ọgwụ mmiri mmiri ma ọ bụ. Mbadamba Tadalafil ma ọ bụ mkpụrụ ọgwụ na-acha odo odo, na-ekpuchi ihe nkiri ma bụrụ nke almọnd. Ha na-ere na 2.5, 5mg, 10mg na 20mg doses. Ajụjụ 9 jụọ onwe gị tupu iwere Avanafil
Mbadamba nkume ahụ na-abanye na paịlị nke 5, 10, 15, 30 na 90 mbadamba ọ bụla. I nwekwara ike inweta ọgwụ ahụ dịka 4, 8, 12, 16 ma ọ bụ 28 mbadamba teepu.
Mbadamba Tadalafil maka iji ya kwa ụbọchị na-abịa na 2.5 mg na 5 mg doses mgbe a na-eji 10mg dose naanị mgbe nwoke ga-enwe mmekọahụ; ma ọ dịkarịa ala minit 30 tupu ị nwee mmekọahụ. Tụle ịdị irè nke ọgwụ ahụ n'ime mmadụ na nnabata ya na ọgwụ ahụ, dọkịta nwere ike ịkọwa ọgwụ onwere dị ka 20 mg ma ọ bụ belatara na 5 mg. Ngwunye 5mg mgbe ọ dị mkpa kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwoke nwere nsogbu ED.
Ntughari Tadalafil a na-atụ aro kwa ụbọchị bụ 2.5 mg ma kwesiri ka ewere ya dị ka oge ụfọdụ kwa ụbọchị. Otú ọ dị, dabere na nrụpụta na nkwado, a pụrụ ịgbatị usoro ọgwụgwọ na 5 mg.
▲ Enwere mbadamba ma ọ bụ ọgwụ ọgwụ Tadalafil?
N'ime ụdị dị iche iche nke Tadalafil, ọgwụ dị na mbadamba nkume ma ọ bụ pill bụ ihe yiri ka mbadamba nkume ndị ahụ dị ogologo maka oge kachasị ogologo ma e jiri ya tụnyere Tadalafil, suspensions na gels. Ndị na-emepụta counterfeits maara na mbadamba ọgwụ ndị kachasị ewu ewu na otú ahụ, ha na-eji nke ahụ eme ihe iji nye ọgwụ ndị ha ji emepụta. Ya mere, ịkwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-azụ Tadalafil, karịsịa mbadamba nkume. Ka mma, nweta ha site na isi akụkọ, karịsịa site na Phcoker.com, n'etiti ndị ọzọ na-atụle Cialis na ndị na-emepụta ihe. Otú ọ dị, nke ahụ apụtaghị na i kwesịghị ile anya mgbe ị na-azụ ụta Tadalafil na gels.
♦ Tadalafil (171596-29-5) mmiri mmiri
Liquid Tadalafil dị ọcha ọcha na agba ma dị ka mbadamba, kwesịrị ịchekwa ya na ebe dị jụụ ma na-ekpo ọkụ, pụọ na okpomọkụ, mmiri nakwa dị ka ìhè na-ekpughe ìhè. Ụmụ nwoke ndị na - enwe nsogbu ịṅụ mbadamba nkume na - achọta Tadalafil mfe iji mee ihe mgbe ọ bụ mmiri. E wezụga nke ahụ, ndị mmadụ na-adịghị ike nsị ọnọdụ dịka dyspepsia na-ahọrọ Tadalafil mmiri n'ihi na ọ dị mfe nsị na-emetụta ya. E wezụga nke ahụ, ọgwụ na mmiri mmiri na-amalite ịrụ ọrụ na mbụ ma e jiri ya tụnyere mbadamba.
N'ezie, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na i jiri mmiri Tadalafil ma ọ bụ Tadalafil mee ihe ma ọ bụ, ọ bụrụhaala na ị zụtara ya site na ebe a tụkwasịrị obi, ị ga-ejide n'aka na ọ ga-adị mma ka ị nwekwuo oke nwoke. Ya mere, ị gaghị etinye oge dị ukwuu na-achọ ụdị ụdị ọgwụ ahụ (ọ gwụla ma ị nwere ihe na-eri ma ọ bụ nke digestive). Ọ bụrụ na ị nweta mbadamba, mmiri ma ọ bụ, ị dị mma ịga.
Na njedebe nke ụbọchị, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eji mmiri Tadalafil ma ọ bụ Cialis mee ihe; ị ka na-enweghi ike ịnweta ezigbo ụlọ ere ị chọrọ. Ya mere, etinyela oge buru ibu na-achọ nhọrọ kachasị mma nke abụọ - ha abụọ dị mma iji mee ka gị na onye ọrụ ibe gị nwee ọnụ ọchị.
A tọhapụrụ usoro mmiri mmiri nke Tadalafil n'ahịa mgbe mbadamba nkume ahụ gasịrị. Yabụ, ha anaghị ewu ewu ma e jiri ya tụnyere mbadamba na yabụ, ụfọdụ ndị nwere ike ịjụ ịdị irè ha mana nke bụ eziokwu bụ na ha enweghịkwa ọfụma. Formdị ọgwụ niile na-eji otu ihe ahụ na-arụ ọrụ ma yabụ, ha dịkwa ntụkwasị obi. Ka o sina dị, gbaa mbọ hụ na ị ga-enweta mmiri ọgwụ Tadalafil n'aka onye na-ere ahịa tụkwasịrị obi n'ezie na ị na-eji ezigbo ọgwụ echekwa.
▲ Otu esi eji mmiri Tadalafil mee ihe
Liquid Tadalafil na-abịa na ikuku na-adị mfe imeghe karama.
Okwesiri ka ị na-agbaji karama ahụ tupu i jiri ya mee ihe iji hụ na a na-etinye ihe ngwọta ahụ ọnụ.
Ị nwere ike iji onye eyedropper iji dọpụta ọgwụ ziri ezi nke ọgwụ
Tinye ọgwụ na ire gị ma ilo. Ọgwụ ọjọọ adịghị mma, n'ihi ya, enyi na enyi ndị na-adịghị amasị ịṅụ ọgwụ na ọgwụ ndị na-adịghị mma na-atọ ụtọ.
Ntinye 5ML nke Tadalafil zuru ezu iji nyere gị aka inwe mmeghachi omume nke nta. Ka o sina dị, cheta na anyị kwuru na ị kwesịrị ịṅụ ọgwụ dịka ntuziaka dọkịta gị si dị.
Ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ na afo efu, o yiri ka ị ga-enwupụta n'ime 15 ruo 20 nkeji nke ịnara ya. Otú ọ dị, ị ga-enweta nsonaazụ kachasị mma nke ọgwụ ahụ mgbe ihe dị ka otu elekere.
Ya mere, agbala ọsọsọ iji weghachite ọgwụ ọzọ ma ọ bụrụ na ịhụghị nsonaazụ n'ime 15 ruo 20 nkeji. Naanị zuo ike na ichere maka 60 gaa na 90 nkeji iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị ga-enwe mmetụta mmetụta nke ọgwụ ahụ.
Ọ bụrụ na nsonaazụ ndị ahụ adịghị abịa n'agbanyeghị ichere 60 na 90 nkeji, jụọ ọkachamara ahụike gị maka nduzi maka ihe ị ga-eme ọzọ. O yikarịrị ka a ga-adụ gị ọdụ ka ị nweta ntinye ọgwụ 1ml nke ọgwụ.
Esemokwu ndị bụ isi dị n'etiti mbadamba Tadalafil na Tadalafil bụ na nke mbụ na-adị mfe ịmịkọrọ n'akụkụ mgbidi nke akụkụ nri nri na yabụ, ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ ka ọ dị nro ma dịkwa nwayọ na usoro nsị. N'ihe banyere mbadamba nkume ndị ahụ, a ghaghị ịkụda ha n'ụdị nke akụkụ nri ahụ ga-etinye obi ha dum tupu absorption na ya mere, mmetụta ha na-ewe ogologo oge iji gosipụta.
Ọ bụ ya mere ndị mmadụ nwere ike ịdaba na nsogbu dị ka dyspepsia na reflux gastroesophage na-achọ mmiri Tadalafil na mbadamba. Nsogbu ndị a anaghị adịkarị mgbe mmadụ na-ewepụta mmiri mmiri ma jiri ya tụnyere mgbe mmadụ were ọgwụ na mbadamba ụrọ.
Tadalafil bụ ihe onwunwe Tadalafil. Mkpụrụ ọgwụ ahụ na-acha ọcha na agba, ọ na-ejikarị ya emepụta mbadamba Tadalafil. Ị nwere ike ịnweta ezi Tadalafil sitere na ndị na-ere ahịa dị ọcha dị ka Phcoker.com.
Ndị ọzọ karịa ịmepụta mbadamba Tadalafil na ọgwụ, Tadalafil nwekwara ike iji mee ka swiiti mmekọahụ na mmekọahụ kọfị.
♦ Tadalafil maka swiiti mmekorita
Mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ bụ ihe ama ama n'etiti ụmụ nwoke nwere nsogbu mmekọahụ, ọkachasị ndị nwere obere agụụ mmekọahụ na nsogbu esemokwu penile dị ka candies ndị a na-eme ka agụụ mmekọahụ na ike ha ka mma. Tadalafil bụ ihe na-emekarị ka candies dị otú ahụ. Candies ahụ dị ụtọ ma yabụ, na-agba mmadụ ume ka ọ were ihe mmezi mmekọahụ na-enweghị nsogbu.
♦ Tadalafil maka mmekọahụ kọfị
Nụrụ nụ banyere kọfị mmekọahụ? Nke a bụ ụdị ihe ọ areụ kindsụ ndị nwere ihe nwere ike ime ka libido gị bawanye. Enwere ike iji ụfọdụ Cialis mee kọfị mmekọahụ, dabere na ike achọrọ nke mmezi mmekọahụ chọrọ.
Karị Tadalafil, kọfị mmekọahụ nwere ihe ndị ọzọ dị ka mmiri oyibo, maca, cinnamon, mmanụ a andụ na Cacao. Ya mere, ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ nwere ekpomeekpo dị ụtọ karịa ka ọ na-atọ ụtọ uto gị. Dị ka nke a, ị gaghị eche na ị na-a aụ ọgwụ.
Ọnụ Tadalafil dị na kọfị kọfị na-emetụta ike nke mmetụta nke ọgwụ ahụ n'ahụ mmadụ mgbe ọ na-aṅụ mmanya.
♦ Ụdị ndị ọzọ
Tadalafil na-abakwa dị ka jelii. Tadalafil jelii bụ ọgwụ ED na-ekwupụta ma ị kwesịrị ikwe ka ọ gbari n'ọnụ gị tupu ilo ya. Ọ dị mfe ilo na ya mere, dabara adaba maka ndị mmadụ na-enwe nsogbu nsogbu na ndị agadi.
Tadalafil– Kedu maka nyocha Tadalafil?
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụmụ nwoke ndị jiri Tadalafil mee ihe na-atọ ụtọ site na nsonaazụ ya. Ka anyị tụlee ụfọdụ nzaghachi anyị natara n'aka ndị ahịa anyị banyere ọgwụ.
Thomson si na Europe: "Ọ na - ekwu na ọ nọ na - eji Tadalafil eme ihe maka ọnwa ise gara aga ma ọ nwere obi ụtọ ịchọta ya. "Adị m 64 afọ ma nwee obi ụtọ n'ihi na, n'agbanyeghị na m nwere afọ 15 ka m na-agbalị ịmalite inwe mmekọahụ na enyi nwanyị m, enwere m ike inwe mmetụta karịa mmadụ karịa oge m chọpụtara ọgwụ a. Enwere m ụlọ nrụpụta dịka m na-eme na mmalite 20s, "ka ọ na-ekwu. Ọ na-aga n'ihu inye ndị ikom ndị ọzọ ndụmọdụ ka ha gbalịa ịkwado Tadalafil ma hụ na ha onwe ha ga-achọta na ọ na-enye aka. "
Cheng si China: “Ọ na-ekwu na nwunye ọ lụrụ ọhụrụ ọ fọrọ obere ka ọ hapụ ya ka ha na-eme njem ezumike ebe ọ bụ na ọ pụghị igbo ya afọ n'ihe ndina. Ọ kọọrọ otu enyi ahụ ahụmahụ ahụ gwara ya ka ọ jiri Tadalafil. “Mgbe anyị nwesịrị Tadalafil, anyị nwere oge kachasị mma nke ezumike anyị na echiche nwunye m chere na m gbanwere. Agbanyeghị, m ga-agwa ya na m na-eji ọgwụ ike nkwalite mmekọahụ mana m ga-eme ka ọ mata oge. Enweghị m ikele ekele maka onye ọ bụla bịara ọgwụ a, ”ka ọ na-ekwu.”
Lam si China: “Ọ na-ekwu na n'ime ọgwụ mmụba mmekọahụ ọ bụla ọ jirila, Tadalafil kachasị mma. "Ọ na-arụpụta bụ ozugbo na-adịgide adịgide maka ogologo oge dị ka tụnyere ndị ọzọ ụdị," ọ na-ede. ”
Khatri si India: "Tadalafil dị oke irè ma baa uru mkpụrụ ego ọ bụla na ọnụahịa ya," ka ọ na-ekwu. Ọ gbakwụnyere na ọ bụ ezie na na mbụ, ọ na-enwebu ahụ ọkụ na mbufụt ihu mgbe ọ usingụsịrị ya, n'oge a ọ dịghị enwe mmetụta ọ bụla mgbe ọ takingụrụ ọgwụ ahụ.
Tong si China: "Abụ m onye na-azụ ahịa na onye na-ere Tadalafil na site na ahụmịhe, enwere m ọgwụ ahụ, enwere m ike iji obi ike kwuo na ọ na-arụ ọrụ," Tong na-ekwu. Ọ na-agbakwụnye, "Ana m akwado ya maka nwoke ọ bụla toro eto na-enweghị nkwarụ,"
Rodrigues si US: "Ọ na-ekwu na ọ zụtara Tadalafil online, site na Phcoker.com ka ọ bụrụ nke ziri ezi, ma dị ezigbo mma."
Zoeng si China: "Tadalafil enyerela m nnukwu oge iji nwetaghachi ùgwù onwe m dị ka nwoke. Ana m eji ya mgbe ụfọdụ, karịsịa na ngwụsị izu mgbe m na-atụ anya ịtọgbọ mmadụ na ọ dịghị mgbe m mechuru m ihu. Ọ ga-amasị m ka m nwee ike inweta ya na ụlọ ọgwụ m. Na-atụ anya na ndị na-azụ ahịa ga-eme ihe ndị dị mkpa. "
George: “Ọ na-ekwu na ya na enyi ya jiri Tadalafil ma ha abụọ nwere mmasị na ya. Ọ na-akwado ya maka ụmụ nwoke ndị ọzọ nwere nsogbu penile erection. ”
Aịzik: "Isaac kwuru na ya na-eji Tadalafil eme ihe tụrụ ya n’anya. “A sị na m maara banyere ya na mbụ,” ka ọ gara n'ihu ikwu. ”
Tadalafil– Otu esi zụta Tadalafil online?
Ikwesighi igaghari na ala icho ebe i ga - azuta Tadalafil. Ị nwere ike ịzụta ọgwụ site na Phcoker.com na nkasi obi nke PC gị ma ọ bụ smartphone.
Nke a bụ usoro nke ịzụta ịntanetị:
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Phcoker.com
Dejupụta ma tinye akwụkwọ anamachọihe maka nzụta
Might Enwere ike ịgwa gị ka dejuo akwụkwọ njụ gbasara ahụike gị dị mkpirikpi; jupụta ya ma nyefee. Ọkachamara anyị ga-enyocha ma eleghị anya ịkwado iwu gị.
Ozugbo a kwadoro usoro iwu gị, ị ga-akwụ ụgwọ maka ngwaahịa ahụ wee chere Phcoker.com iji nye gị ya.
(1)Tadalafil ahịa na ahịa
A na-ere Tadalafil n'ọtụtụ dị iche iche site na ndị na-ere ya dị iche iche. Nke a bụ ụdị ọnụahịa nke Tadalafil Canada dịka n'oge edere edemede a (November 2018).
Ọnụ ọgụgụ nke mbadamba mbadamba ọ bụla Ibu ibu kwa mbadamba Ahịa ahịa ahịa
Olileanya, okpokoro na-enye gị nkọwatụ nke ụgwọ Tadalafil.
(2)Ahịa Tadalafil/ onye si na mba dị iche iche
Xuchang Shangke Chemical Co., Ltd, nke a makwaara dị ka Phcoker, bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke China nke na-ahụ maka nrụpụta nke ndị na-ahụ maka ọgwụ na-arụ ọrụ na ngwaahịa gụnyere Tadalafil. Companylọ ọrụ ahụ na-etinye ude ude dị elu na ụlọ ọrụ ọgwụ yana akụrụngwa ọgbara ọhụrụ na mgbakwunye na iji ụlọ nyocha kachasị elu maka njikwa njikwa njikwa mma. Phcoker.com bụ ụlọ ahịa maka ndị ahịa si China, North America, Europe na India chọrọ ezigbo Tadalafil. Ọ bụ ebe ị ga - enweta Tadalafil kacha mma.
Enwere ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye Tadalafil n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Nke a bụ tebụl na-egosi ndị nrụpụta ọrụ na ngwa ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na mba ha nọ na ya:
Tadalafil (171596-29-5) -Summary
Ụmụ nwoke, karịsịa ndị kụrụ afọ 60 nwere ike ịdaba na ED. O di nwute, na-eso ntọhapụ nke Tadalafil; onye ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ inwe mmekọahụ ọ bụla n'agbanyeghị afọ ole ọ dị, ekele maka mmetụta nke ọgwụ ahụ. Ka o sina dị, ị ga-achọ ndụmọdụ site na onye ọkachamara ahụike ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọgwụ a zere ụfọdụ nsogbu mmetụta.
Ọbụna na-agbaso ndụmọdụ dọkịta, nwoke nke jiri Tadalafil nwere ike ịnweta otu ma ọ bụ ọtụtụ mmetụta dị na ya, ụfọdụ n'ime ha chọrọ nlekọta ahụike ọkachamara ebe ndị ọzọ nwere ike ịhapụ naanị onwe ha oge. Kedu ihe a na-emekarị na mbaracetam: gịnị ka ọ na-enye anyị?
Tadalafil na-abịa dị ka mbadamba, mkpụrụ ọgwụ, mmiri mmiri ,, candies na kọfị nakwa na ụdị jelii. Mbadamba Tadalafil, mkpụrụ ọgwụ na mmiri mmiri na-arụ ọrụ nke ọma ebe ọ bụ na ha nwere otu ihe ahụ na-arụ ọrụ. N'ihe banyere kọfị na candies, ịdị irè nke ọgwụ ahụ dabere na ọnụọgụ nke ọgwụ eji eme ihe dị na ngwaahịa.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ijide n'aka na Tadalafil ị na-eji bụ ezigbo, zụta ya n'aka onye nrụpụta Tadalafil tụkwasịrị obi ma ọ bụ onye nrụpụta Tadalafil dị ka Phcoker.com. Tadalafil bụ ọgwụ ị na-aga maka gị ọgwụgwọ ED dị ka nwoke.
1.National Center For Information Biotechnology, US. National Library of Medicine, Tadalafil, Pubchem Sections 1-10.
2.Evelyn C. Cortez, CIALIS (Tadalafil): Na-eji, Ngwọta, Ozi Mmetụta Na Ebe tozụta Generic Cialis (Tadalafil), Viagra (Sildenafil), na Ọgwụ Ndị Ọzọ Kachasị Mma Na-adịghị Ahụfe, Na-ebipụta, 13 Dec 2017, peeji nke 5-3
James Lee Anderson, Cialis, Tadalafil: Na-agwọ Erectile Dysfunction, Mgbaàmà nke Benign Prostatic Hyperplasia, na Pulmonary Arterial Hypertension, CreatSpace Independent Publishing Platform, 3 Mar 26, peeji nke 2015-5.
Mkparịta ụka isiokwu ọkụ:
1. Tadalafil dị mma? 2. Kedu ka m ga - esi meziwanye dysfunction m?
3. M na-aṅụ Cialis? 4. Kedu ka esi meziwanye mmetụta tadalafil?
5. Kedu ọgwụ kacha mma maka dysfunction? 6. Ogologo oge ole ka ị ga-eji tadalafil maka?